मधेसमा यसरी पाक्दैछ राजनीतिको खिचडी
प्रकाशित मिति : 12:40 pm, September 13, 2016
२८ भदौ, काठमाडौं । अब चुनाव भयो भने मधेसमा पहिलो शक्तिको नेतृत्व कसले गर्ला ? उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर या राजेन्द्र महतो ? या कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता राष्ट्रिय पार्टीहरुले नै फेरि पनि मधेसका क्षेत्रीय पार्टीलाई जित्लान् ? मुख्यमन्त्री कुन पार्टीले हत्याउला ?
मधेसको राजनीतिमा अहिले यिनै दुईवटा प्रश्न मुखरित भइरहेका छन्ः पहिलो प्रश्न हो- सहमति हुनै नदिने र चुनावलाई भाँड्न खोज्ने तत्व को हो ? र, दोस्रो- आगामी चुनावमा मधेसमा कुन पार्टीको वर्चश्व कायम होला ?
दलहरुवीच राजनीतिक सहमति र सीमांकनको समस्या नै समाधान नभइरहेको अवस्थामा मधेसको चुनावी आँकलन गर्नु हतारो हुन सक्छ । तर, त्यहाँको चुनावी दाउपेच अहिलेको मधेस आन्दोलन र राजनीतिक चलखेलसँग प्रत्यक्ष रुपमा गाँसिएको विषय हो ।
कतिपय विश्लेषकहरुको दाबी के छ भने अब मधेसको राजनीतिमा विजयकुमार गच्छदारको ‘युग’ समाप्त हुँदैछ । गच्छदारको हालत अब बद्री मण्डलको भन्दा पनि खराब हुनेछ ।
र, यतिबेला अर्को दाबी के गर्न थालिएको छ भने अबको चुनावमा मधेसबाट उपेन्द्र यादवको समेत स्खलन प्रारम्भ हुनेछ । अर्थात् यो पनि भनिँदैछ कि गच्छदारपछि अब मधेसबाट उपेन्द्र यादवलाई पत्तासाफ गर्ने अभियानमा जुटेका छन् मधेसी मोर्चाका अन्य घटकहरु ।
तर, उपेन्द्र यादवको दलका नेताहरु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरुको दाबी छ कि अबको चुनावमा उपेन्द्र नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नै अन्य मधेसवादी दलभन्दा श्रेष्ठ दल ठहरिने छ ।
वीरगञ्जदेखि बालुवाटारसम्म आइपुग्दा राजेन्द्र महतो
नयाँ संविधान बनिसकेपछि मधेसमा आन्दोलन भयो । यस क्रममा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई कठोर नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजियो । महतोलाई यस्तो चित्रण गरिनु स्वाभाविकै थियो । किनभने, महतोले त्यसबेला काठमाडौंसँग सम्झौताहीन नीति लिएकै हुन् ।
दसैंका बेलामा केही समय नाकाबन्दी खोल्नुपर्छ भन्नेमा अन्य मधेसी नेताहरु नरम देखिए पनि महतो भने त्यसको विपक्षमा उभिए । उनी वीरगञ्ज र रक्सौलमा बसेर आफैं नाकाबन्दी र धर्नामा सक्रिय बने । वार्ता गर्नुपर्छ भने मधेसमा आऊ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उनले सरकालाई दबाव दिए ।
महतोको यही कठोर अडानले गर्दा पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा उनी मधेसी समुदायबीच निकै लोकप्रिय बने । काठमाडौंबाट ओलीलाई हेर्दा जस्तो देखिन्छ, वीरगञ्जबाट महतोलाई हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ भन्ने पदावलीसमेत प्रयोग गर्न थालियो । फलस्वरुप, पहिलो मधेस आन्दोलनले जसरी उपेन्द्र यादवलाई मधेसी समुदायमा लोकप्रिय बनाएको थियो, यसपालि महतोले त्यो ठाउँ लिए ।
राजेन्द्र महतो मधेसमा जसरी लोकप्रिय बन्दै थिए, पहाड र काठमाडौंमा उनको अलोकप्रियताको ताप त्यति नै बढिरहेको थियो । तर, आफू सहमति विरोधी होइन है भन्ने सन्देश दिन महतो चुकेनन् । उनी सीधै बालुवाटार गए र ओलीसँग भेट गरे । यसले गर्दा काठमाडौं र पहाडमा भइरहेको महतोमाथिको प्रहार केही मत्थरजस्तो देखिन थाल्यो ।